China JCB yepamusoro roller mutakuri roller JCB200 JCB220 JCB260 JCB260 JCB300 fekitori nevatengesi | Chokwadi cheGlobal
JCB yepamusoro roller mutakuri roller JCB200 JCB220 JCB240 JCB260 JCB300
Kumusoro Kuoma HRC50-56, pakadzika: 4mm-10mm
FOB Mutengo FOB Xiamen USD 10-100 / Piece
2. Dhiza / dhizaini / Details Pics
Iyo yekurapa yekupisa automation mutsara unotora yakakwira yese quenching nzira yekugadzira iyo roller uye inogona kusangana nehunyanzvi hunodiwa hwe roller. Iko kudzora uye kuongorora kune yekugadzira mutsara zvese zvinozadzikiswa necomputer system neye advanced control mode uye yekuongorora nzira.
Iyo inochinja-chinja roller yekuunganidza inosvitsa nzvimbo dzakawanda dzekushanda. Iwo ma roller anogezeswa musati asangana ne washer kuti avimbise kuchena nekuisa chisimbiso kushanda kwechigadzirwa.
Kune mamwe mafomu ereferensi yako
DHUTA ROLLER Carrier ROLLER
Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neyakajairwa neOEM kugadzira
Yepfuura: Crawler Crane KH150-2 mutakuri roller
Inotevera: BD2G. BD2F Mutakuri roller, Pamusoro roller uye Upper Roller
JCB inotakura roller
JCB yepamusoro roller inotakura roller JCB200 JCB220 JCB ...
PC200-7 Mutakuri Roller, Up Roller Wekufukura ...
PC1200 track roller, yepazasi roller yeKOMA ...
mini excavator yepamusoro roller / inotakura roller / yepamusoro ...
Tengesa PC60-7 mutakuri wesimbi mutya wedhi wedhi oem no.21W-30 -...